🥇 ▷ Huawei Mate 30 waxaa lagu toogtay sawirro dhab ah ✅
Huawei Mate 30 waxaa lagu toogtay sawirro dhab ah
Hal bil uun ka dib soo bandhigeedii (sida laga soo xigtay wararka xanta ah ee ugu dambeeyay ee soo baxayay) Huawei Mate 30 Pro ma joogsaneyso daadinta. Dhowr saacadood ka hor waxaan awoodnay inaan aragno muuqaal fikradeed oo ku saabsan waxa naqshaddaada ugu dambeysay u ekaan doonto, oo leh sumcad aad u ballaaran iyo kamarad leh saxiix wareeg ah. Laakiin hadda waa soo noqoshada Huawei Mate 30, moodalka caadiga ah. Tan waxaa lagu ugaadhsaday sawirro dhab ah.
Isdiiwaangalso si aad u hesho wararka teknolojiyadda ugu dambeeyay ee boostada boostada. Waxaan kuu soo diri doonaa hal emayl hal maalin ah oo ay ku jiraan soo koobitaanka cinwaannada wararka, khiyaanooyinka, isbarbardhiga, dib u eegista lagu daabacay mareegtadayada.
Huawei Mate 30 wuxuu soo bandhigayaa soo nooleyn ama feejignaan cabir yar marka la barbar dhigo Mate 30 Pro. Waxay umuuqataa in aaladani aysan yeelan doonin furitaan wajiga 3D ah, sida nooca Pro-ka. Laakiin taa bedelkeeda waxaan si fiican u adeegsanaa furfurnaanshaha iyo xog uruurinta kaamil ah, taas oo guryo u eg sida kamarad laba jibaaran oo iskii isu beddela. In kasta oo runtu ay tahay in muuqaalka si mugdi leh u muuqdo oo aad dhib u kala saari kartid kan dareemayaasha ama xitaa qofka hadlaya ee wicitaannada ah. Intaa waxaa sii dheer, waxay umuuqataa in Mate 30 sidoo kale uu lahaan doono laba dhinac oo wareegsan dhinacyada, laakiin aan loogu dhawaaqin sida qeybta kore. Muuqaal kale ayaa muujinaya dhabarka, laakiin maadaama ay kujirto dabool ilaalinaaya kana fogaanaya aragtida kaamirada, garan mayno inuu yahay kamarad leh qaab laba jibaaran, sida midkii hore, ama qaab wareega ah sida daadin kara ayaa yidhi.
HUAWEI Mate30 Taxanaha？#Huawei # HUAWEIMate30 # HuaweiMate30Pro # Mate30pro # Mate30 # Mate30Series pic.twitter.com/EnkmdLvhd4
– 纳慕斯 的 湖畔 (@NamusLake) Ogast 11, 2019
Tilmaamaha suurtagalka ah ee Huawei Mate 30
Huawei Mate 30 Pro wuxuu la imaan karaa processor Kirin 990, chip isku mid ah oo ku dari doona Huawei Mate 30 Pro. Intaa waxaa sii dheer, waxay sidoo kale lahaan lahayd qaabeyn muuqaal saddex-laab ah oo kamarado ah oo aad ugu eg nooca sare, laakiin laga yaabee inuu leeyahay qaraar hoose. Wararka xanta ah ayaa sheegaya in moodalkan lagu dhawaaqi doono Sebtember 19. Huawei wali ma uusan xaqiijin taariikhda la siidaayay, laakiin tixgelin la siinayo taxanaha Mate 20 ayaa lagu dhawaaqay bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, la yaab nagu noqon mayno inaan si rasmi ah u aragno labadan moodel ee cusub bil kadib.
Warar kale oo ku saabsan… Huawei, Huawei Mate